Fampidiran-drivotra ny induko Nitino amin'ny fampisehoana mahazatra
Sokajy: Induction Heating Tags: meninol hafanana, fanidiana fanalefahana Nitinol, famindrana hafanana Nitinol, fampidirana fametrahana Nitinol, Nitondra fanamafisam-bidy fananganana, Ny hafanana mitinina mitinol, stting Nitinol
Induction Heat setting Nitinol amin'ny High Frequency RF Induction Heating Equipment
Tanjona hanafanana tariby Nitinol savaivony 0.005 "(0.13mm) ho an'ny rafi-pandrafetana
Fitaovana fampidirana herinaratra fampidirana DW-UHF-6kW-I fitaovana feno tobim-pahanginana lavitra misy fitoerana 0.33μF roa (total 0.66μF). Coil-fanafanana induction namboarina sy novolavolaina manokana ho an'ity fampiharana ity.
Fandaharana Ny vinavinam-bola natolotry ny mpanjifa dia misy varingarina roa mifampitohy: varingarina ivelany misy lavaka 0.1 "(2.54mm) no mipetaka amin'ny varingarina mafy misy savaivony 1" (25.4mm) Ny endrika Nitinol takiana dia voasokitra amin'ny OD an'ny varingarina anatiny. Ny fametahana vy mafy natolotra dia novaina mba hampihenana ny hafanana
bahoaka. Ny varingarina anatiny mafy dia atsofoka hahafahana mampiditra coil ao anaty ID. Coil helikaly anatiny sy ivelany mihodina efatra no ampiasaina mba hamoronana lamina hafanana takiana. Ny fanandramana voalohany dia atao (amin'ny fampiasana thermocouple) amin'ny fitaovana tsy misy ampahany hametrahana ny tsingerin'ny fanafanana. Ny ampahany dia apetraka ao anaty fiasa sy ny coil-induction-heat coil eo ambonin'ilay ampahany. Ny herinaratra dia omena mandra-pahafana ny ampahany amin'ilay teboka napetraka ary tazonina amin'ity mari-pana ity mandritra ny 2.5 minitra. Ny famonoana dia novonoina avy hatrany tao anaty rano taorian'ny fihodinan'ny hafanana. Ny ampahany dia natao amin'ny famaritana ny fitadidiana endrika.
Vokatra / tombony azo avy amin'ny rafitra Ameritherm ny setroka amin'ny teboka voatondro amin'ny tahan'ny voalaza ary ny tariby Nitinol dia miendrika izay tadiavina ao anatin'ny 4 minitra, mampiasa angovo sy fotoana kely noho ny lafaoro nentim-paharazana